समाचार प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य ज’टिल, पाइपबाटै खाना ! - dautarimedia.com
समाचार प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य ज’टिल, पाइपबाटै खाना !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य ज’टिल बन्दै गएको छ ।सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक एक तस्वीरमा सीता निकै दु’ब्ली र क’मजोरजस्तो देखिएकी छन् ।
सो तस्वीरमा सीतासँगै उनका पति प्रचण्ड, छोरी र नातिनीहरु छन् ।पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनलाई पाइपबाट हल्का खाना खुवाउने गरिएको छ ।
‘हातखुट्टा च’ल्दैनन्, आँखा जु’धाएर हेर्न सक्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘दि’सा–पि’साब गराइदिनुपर्छ, खाना पनि झो’लजस्तो बनाएर पाइपबाट खु’वाइदिनुपर्छ ।’
दाहाल लामो समयदेखि पा’र्किन्स’न जस्तो देखिने ज’टिल प्रकारको रो’ग ‘प्रो’ग्रे’सि’भ सु’परान्यु’क्लियर पा’ल्सी (पी’.एस.पी.)’ बाट पी’डित छिन् । यो रो’ग पूर्णरुपमा नि’को नहुने र रो’कथा’ममात्र गर्न सकिने डा. प्रत्युष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सीतालाई यसअघि अमेरिका, सिंगापुर र भारतका विभिन्न अस्पतालमा लगेर उपचार गराइसकिएको छ । यही वैशाख दोस्रो साता उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालले तीन दिनपछि डि’स्चार्ज गरेपछि उनी हाल खु’मलटारस्थित निवासमै छिन् ।
Previous: सोमबारका दिन भगवान शिवलाई सम्झेर गर्नुहोस यि काम, तपाईको मनोकाक्षा पूरा हुनेछ
Next: धरहरालाई मास्क ‘लगाएर’ सुरु गरियो मास्क अभियान !